तरकारीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, किन बढ्यो मूल्य ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
तरकारीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, किन बढ्यो मूल्य ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा तरकारीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । अधिकाशं तरकारी एकैपटक तरकारी महंगो भएर नयाँ रेकर्ड राखेको हो । भारतमा नै तरकारी उत्पादन कम भएकाले तरकारी नै कम आएकाले मूल्य बढेको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
कालिमाटी बजारमा गोलभेँडाको खुद्रा मूल्य किलोको १२० रुपैयाँ पुगेको छ । खुद्रामा एक सय ५० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । सेतो आलुको मूल्य किलोको ७० रुपैयाँ रहेको कालीमाटी बजारमा काउलीको मूल्य ११० रुपैयाँ पुगेको छ । कालिमाटीमा बोडी र मटरकोशा किलोको १३० रुपैयाँ पुगेको छ । हरियो प्याज १४० रुपैयाँ प्रतिकेजी छ ।
एक किलो घिउ सिमी किन्न ११० र तितेकरेला १२० रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । गाजर पनि किलोको १३० रुपैयाँ भएको छ । कालिमाटी बजारमै परवर ८० रुपैयाँ पर्छ भने हरियो फर्सीको मूल्य ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
भिण्डीको मूल्य सय रुपैयाा प्रतिकेजी छ भने पालुंगो र चमसुरको साग कािलेको ११० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । कागतीलाई केहीको ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भेडेँ खुर्सानी किलाको १३० रुपैयाँ पर्छ भने हरियो लसुुनको मूल्य किलोको १७० रुपैयाँ छ । हरियो धनियाँ किलोको ३९० रुपैयाँ पुग्दा हरियो खुर्सानी ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भइरहेको छ ।
कालिमाटी बजारमा च्याउ किलोको २ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी १३०, चुकन्दर ९०, जिरीको साग ११०, पार्सले १२० रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालमा तरकारी तथा फलफूलहरु एकदमै कम मात्रामा उत्पादन हुने भएकोले तरकारी छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली बजारमा भारतबाट दैनिक ७ सय मेट्रिक टन तरकारी आइरहेकोमा हाल करिब ४५० मेट्रिक टन औसतमा आइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब एक हजारदेखि १२ सय मेट्रिक टनजति माग रहेको अनुमान गरिएको छ ।
रसुवा । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत पार्न रसुवामा वाम […]